Myanmar has agreed to the appointment of Mrs. Riikka Laatu as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Finland to the Republic of the Union of Myanmar – Ministry of Foreign Affairs
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mrs. Riikka Laatu as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Finland to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Yangon.
Mrs. Riikka Laatu was born in 1956 in Karvia, Finland. She receivedaMaster’s Degree in Geography form the University of Helsinki. Prior to joining the Ministry for Foreign Affairs, she worked at the University of Helsinki asaLecturer in Geography. Mrs. Riikka Laatu has been working in the Ministry for Foreign Affairs of Finland since 1985, and served in various capacities. From 2007 to 2011, she served as Permanent Representative of Finland to FAO and the other United Nations Organizations in Rome. Afterward, she served as the Director, Unit for Sectoral Policy in the Ministry for Foreign Affairs, Helsinki, from 2011 to 2013. Since 2013, she has held the position of Deputy Director General, Development Policy.
She is married, and has three adult children.
Dated:4May 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် Mrs. Riikka Laatu အား ခန့်အပ်ရန် သဘောတူ
Mrs. Riikka Laatu အား ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Mrs. Riikka Laatu ကို ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ ကာဗီယာမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ဟယ်လ်ဆင်ကီးတက္ကသိုလ်မှ ပထဝီအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ မဝင်ရောက်မီက ဟယ်လ်ဆင်ကီးတက္ကသိုလ်၌ ပထဝီဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ နည်းပြအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဖင်လန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ရောမမြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖင်လန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ဖင်လန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မူဝါဒရေးရာဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မူဝါဒရေးရာဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ သားသမီး (၃) ဦး ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ မေလ ၄ ရက်